Ọgbakọ nke a n'akpọ "'''Wikimidiya Daivasiti Konfirensi 2017'''" - Meta
Ọgbakọ nke a n'akpọ "'''Wikimidiya Daivasiti Konfirensi 2017'''"
Gini kpatara ọgbakọ a "Daivasiti Konfirensi"
Ọ bụ ebumnaobi ndi Wikimidiya inye mmadụ nile ohere n'efụ na okike ma nwete ihe ọmụma ndi mmadụ, ọ bụ nkwalite imezi nkeọma arụmarụ anyi ya na izụlite mkpakọrita na mmekọrita anyi ndi Wikimidiya. Ndụzi ụkpụrụ anyi ya na nkwado anyi si na mgbali ime arụmarụ Wikipediya na Wikimidiya ka agụnye ya na obosara mmadụ nile,na obodo, ọgbakọ na amụmaihe. Anyi ma na ọrụ ka diri anyi.
Ọtụtụ echiche maka mmụba ndicheiche a pụtala ihe na ije Wikimidiya, ya mere ọnọdụ eweghi ndicheiche ji bụrụ anyi ndi omenaobioma Wikimidiya ihe mkpatemmụọ na izụlite ọrụ mmụtaihe na efụ.
Wikimidiya ndi "Suwideni" na eme ihe atụmatụ Konfirensia inwe isiokwụ di iche iche nke ndi Wikimediya ga atụle ma nwale. Gini ka anyi mụtara banyere nsọnye ndi di iche iche site na otụ ndi Wikimidiya si eme ihe, ya na mmụba ndiche ọrụ ndi Wikimidiya? Ole otụ ihe anyi mụtara ga esi abara anyi ụrụ?
Anyi chọrọ ka konfirensi a nye ndi mmadụ ohere ike ahụmaihe si na irụ ọrụ di iche iche na Wikimidiya. Ndi òtùa ga ezụkọ ma tụle ndiche di iche iche dika okike (jenda),ikike anụ ahụ na echiche, mmụta asụsụ,ọdidi ala,agbụrụ di iche iche.Nnọkọ a ga enyocha ihe ndia na njikọ ha nwere na okwu banyere ike, msoroibe na ùgwù, yana otụ osiri gbasa mma na mkpa ihe ọmụma na efụ. Na nzụkọ a, ebụmnaobi anyi bụ inwe nghota zụrụ oke banyere otụ ndiniche ga esi agba Wikimidiya ụme na ọrụ, yana otụ mmekọta ga enye aka na ije ebụmnaobi ha.
Obi di anyi ụtọ igwa ụnụ na Katherine Maher, onye isi oche na Wikimidiya Faụndeshọni, ga abia nzụkọ a (konfirensi).
Ole ndi akwadoro nzụkọ a?
Anyi ga anabata òtù si na ebe na enwemagi ndi na nnọchitere ha na Wikimidiya, òtù ndi di ntakiri na ndi isi na akwado ndiche na Wikimidiya, yana ndi isi kwenyere na ebụmnobi Wikimidiya.
Ndi mkpebi na ihe gbasara atụmatụ nzụkọ a bụ ndi ọkachamara. Òtù atụmatụ a ga anabata aro na ebe peeji okwu.
Ndi òtù (ndi òtù ọzọ a ga ekpebi)
Ndeba aha maka nzụkọ a "Wikimidiya Daivasiti Konfirensi 2017" ebidola.
Maka gini ka mụ ga eji edeba aha?
Isonye:Ndi nile chọrọ isonye ga etinye akwụkwọ, ha ga egosi kwa na ha tozụrụ isonye na nzụkọ a.
Odidi atụmatụ: Ngalaba mbụ n'akwụkwọ ndeba aha gbasara ndi chọrọ isonye na nzụkọ ha ga akọwara ndi atụmatụ ihe ha bụnobi imụta, ikụzi na ahụmihe n'oge ọrụ ndiche Wikimidiya. Ndi nsoye bụ ndi di oke mkpa na nzụkọ a.
Onye ndu na Mmụme: Onye ọbụla chọrọ idu na mmụme dika ikwụ okwu,nkata,m'ọbụ nkụzi ga egosi nka n'akwụkwọ ndenye aha ya. Ngosia ga enyere ndi atụmatụ aka ituziri onye ahụ aka. Agaghi enwe usoro pụrụ iche itinye akwụkwọ eji a họpụta ihe achọrọ ime.
Itinye akwụkwọ maka egonyemaka: Akwụkwọ ndenye aha nwekwara ngalaba maka nke a Akwụkwọ icho egonyemaka onye chọrọ nyemaka nke abụọ m'ọbụ nke atọ ga etinye akwụkwọ tụpụ ụbọchi nke iri abụọ, na ọnwa nke asatọ.
Sara Mörtsell.I nwere ike ikpọtụrụ Sera n'eba user page m'ọbụ eba sara.mortsell wikimedia.se.
John Andersson.I nwere ike ikpọtụrụ
jọnụ n'eba user page m'ọbụ eba john.andersson wikimedia.se.
I nyere ike ikpọtụrụ anyi oge ọbụla.
Ụbọchi:Atọ rụo ise na Ọnwa asatọ na afọ 2017
Eba mgbakọ:Sheraton, Stockholm
Ozi: Sara Mörtsell (WMSE)
Retrieved from "https://meta.wikimedia.org/w/index.php?title=Wikimedia_Diversity_Conference_2017/ig&oldid=19251556"